The New and Unusal Malware Called Vigilante Blocks Pirated Sites. ﻿
The New and Unusal Malware Called Vigilante Blocks Pirated Sites.
Pirated Site များကို Block ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေတဲ့ Vigilante Malware
SophosLabs မှ သုသေသနပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “Andrew Brandt” ဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ ပုံစံတစ်ခုနဲ့ “Vigilante” ဟု အမည်ပေးထားတဲ့ Malware တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Malware ဟာ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရသူများမှ Third-party website တစ်ခုခုမှတဆင့် pirated software များနှင့် ဂိမ်းများကို download ပြုလုပ်လိုက်သည့်အခါတွင် ပါဝင်လာနိုင်ပြီး Malware ကိုတစ်ပါတည်း install ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကာ ထိုသူများရဲ့ ကွန်ပြူတာအတွင်း ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဖိုင်ရဲ့အမည်အား တိုက်ခိုက်သူဖက်မှထိန်းချုပ်ထားတဲ့ server သို့ အဆိုပါကွန်ပြူတာများရဲ့ IP address များနှင့်အတူ ပေးပို့နိုင်စွမ်းရှိနေပါတယ်။
ပြီးနောက်တွင်တော့ Vigilante ဟာ ထိုသူတို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာများတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်၍ Pirated website များဖြစ်တဲ့ thepiratebay.com နှင့် အခြားသော pirate site ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်သို့ ဝင်ရောက်၍မရနိုင်စေရန် block ပြုလုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အဆိုပါ website များဟာ pirated software များ၊ video များနှင့် အခြားသောဖိုင်များကို မျှဝေခြင်း၊ ဖြန့်ချီခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် အသုံးများသော website များဖြစ်ကြပါတယ်။
Brandt ကတော့ သူ့ရဲ့ Twitter ပေါ်တွင် - “ဒီလိုမျိုး Malware ကိုတွေ့ရှိရခြင်းဟာ တစ်ကယ်ပဲထူးခြားလှပါတယ်။ အများအားဖြင့် Malware အများစုကို password များ၊ keystroke များ (သို့) cookie များနှင့် intellectual ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခိုးယူဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပြူတာအတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ဖို့၊ CUP cycle များကိုဝင်ရောက်၍ Cryptocurrency mining ပြုလုပ်ဖို့ အစရှိတဲ့ “ခိုးယူခြင်းတစ်မျိုးတည်းနှင့်သာ” သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများကြောင့်ပဲ ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။” “သို့ပေမယ့် ဒီကိစ္စမှာတော့ ဖော်ပြလျှက်ရှိနေတဲ့ နမူနာစမ်းသပ်မှုများအရ အထက်တွင်ပြောကြားသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုသာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Malware တစ်ခုဖြစ်ပြီး သာမန်တွေ့လေ့ရှိတဲ့ Malware ကိုအသုံးပြုပြီး ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများနဲ့ ကွဲပြားနေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။” ဟူ၍ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။